Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izwe | Isifunda » i-United Kingdom » I-UK izomisa ukuhlolwa kwe-COVID-19 ezivakashini ezigonywe ngokugcwele
UNdunankulu waseBrithani uBoris Johnson
Njengamanje, lapho befika e-UK, izivakashi zakwamanye amazwe ezigonywe ngokugcwele kudingeka zenze ukuhlolwa kokugeleza kwegazi okuhlangene ngaphambi kokuphela kosuku lwesibili, kuyilapho abantu abangagonyiwe kanye nalawo ama-jabs alawulwayo angagunyaziwe iziphathimandla zaseBrithani kufanele bahlole i-PCR kabili - eyodwa. ngosuku lwesibili nangolunye ngosuku lwesishiyagalombili - bese uvalelwa yedwa ehhotela.
Ekhuluma nabezindaba ngesikhathi evakashele esibhedlela iMilton Keynes University Hospital, eBuckinghamshire, UNdunankulu waseBrithani u-Boris Johnsonn ithe "leli zwe livulekele amabhizinisi, livulekele abahambi," ngenkathi imemezela ukuthi izivakashi zakwamanye amazwe ezigonyelwe i-COVID-19 maduze zizokwazi ukweqa izivivinyo ze-coronavirus lapho zifika eGreat Britain.
"Uzobona izinguquko ukuze abantu abafikayo bangabe besahlola ... uma sebegonywe kabili," kusho u-PM.
Johnson, osanda kuzithola esenkingeni yokulahlekelwa umsebenzi ohamba phambili ngemuva kwehlazo elithi 'Partygate', uthe, ngenxa "yezinqumo ezinzima" zikahulumeni wakhe kanye "nezingcingo ezinkulu," UK lase liphenduke “umnotho nomphakathi ovuleke kunawo wonke eYurophu.”
Johnson ubelokhu ebhekene nokugxekwa okwandayo okuvela emphakathini, amalungu ePhalamende aphikisayo, kanye nozakwabo eqenjini lakhe, ngezinsolo zolwazi lwakhe noma ukuhlanganyela emaphathini angekho emthethweni abasebenzi base-Downing Street ngesikhathi kuvalwa i-COVID-2020 ngo-19.
Ngemuva kwalesi sihlava, u-Boris Johnson umemezele ukuthi cishe yonke imikhawulo ye-COVID-19 izochithwa eNgilandi, okubandakanya ukugqokwa imaski okuyimpoqo kanye nezeluleko zokusebenza usuka ekhaya. Isisebenzi sikahulumeni esiphezulu u-Sue Gray uthweswe icala lokuqhuba uphenyo futhi uzoshicilela umbiko wakhe kuleli sonto.
UNdunankulu akazange alucacise usuku lolu shintsho oluzoqala ngalo ukusebenza futhi akazange anikeze eminye imininingwane. Nokho, uNobhala wezokuThutha uGrant Shapps kulindeleke ukuthi enze isitatimende ngokuhamba kwesikhathi.
Njengamanje, lapho ufika e- UK, izivakashi zakwamanye amazwe ezigonywe ngokugcwele kudingeka zenze ukuhlolwa kokugeleza kwezinhlangothi ngaphambi kokuphela kosuku lwesibili, kuyilapho abantu abangagonyiwe kanye nalawo ama-jabs alawulwayo angagunyazwanga iziphathimandla zaseBrithani kufanele bahlole i-PCR kabili - olulodwa ngosuku lwesibili kanti omunye ngosuku lwesishiyagalombili - bese uvalelwa ehhotela.
Boris Johnson Covid-19 Ezokuthutha
Ukutholwa Okusha Kwesithiyo Sokwelapha Umdlavuza Wepancreatic...